Akusekho mfuneko yokuba ukhathazeke ngokufezekiswa kweeodolo zakho zeShopify. Sikuthathela umnqwazi apha kwiFulfillPanda, kwaye sihambisa ukuzaliseka okukhethekileyo kubathengi bakho.
I-Dianxiaomi yenza i-Shopify izalisekise i-odolo kwiFulfill Panda. Sinceda ukuThengisa amashishini ukuba afezekise ukulindelwa kwabathengi ngokubanceda ukuhambisa iiodolo ngokukhawuleza nangokungabizi kakhulu kangangoko kunokwenzeka.
Ivenkile yenza unxibelelwano ngaphandle komzamo kunye neqonga lethu ukuze uzalisekise ukuzaliseka kunye nolawulo lwempahla, ekuvumela ukuba ugxile ekuthengiseni nasekwandiseni ishishini lakho kunokuba ukhathazeke ngokufezekiswa komyalelo.
Ngamanyathelo nje ambalwa alula, ungaqhagamshela ishishini lakho lokuthenga kwi-Dianxiaomi software yokufezekisa.
Ngokucinezela iqhosha, ungaqhagamshela ivenkile yakho kwaye ungenise iiodolo zakho kwimizuzwana. Ngokudityaniswa kwe-API yethu elula, ungaqala ngaphandle kokufuna umphuhlisi kuba umsebenzi obuyela umva sele wenzelwe wena.
Ukuzaliseka ngokupheleleyo komyalelo.
Xa umthengi ebeka iodolo kwindawo yakho yakwaShopify, ithunyelwa kwangoko kwiziko lokufezekisa elikhethekileyo likaDianxiaomi, apho ikhethwe khona, ipakishwe kwaye ithunyelwe.
Ukusuka ekuthengeni kwabathengi ngokuhambisa, unokulandela inkqubo yokufezekisa iodolo usebenzisa ideshibhodi yakho yeDianxiaomi.
Ukuhanjiswa kwevenkile kuyakhawuleza.
Xa bathenga kwi-Intanethi, abathengi bakho balindele ukuhambisa ngokukhawuleza, ngexabiso eliphantsi.
Unokuhamba ne-Dianxiaomi, enika uluhlu olubanzi lwamaxabiso kunye namaxesha okuhambisa ukuze ahambelane neemfuno zakho.
Ii-odolo ezibekwe phambi kwentsimbi yesine emva kwexesha ziya kwenziwa kwaye zithunyelwe kwangolo suku!
Ulwazi lokulandela umkhondo lufakwa kwangoko kwivenkile yakho yakwaShopify kwaye luthunyelwe kubathengi bakho nje xa kuthengwa iinqanawa.
Ulawulo lwempahla ye-Shopify
Usebenzisa inkqubo yethu yolawulo lokugcina, gcina umkhondo wesitokhwe sakho esininzi kwizibonelelo zethu zokufezekisa. Lonke ulwazi luhlaziywa ngexesha lokwenyani, ukuvumela ukuba uphinde uhlele iimveliso kubathengisi bakho baseTshayina njengoko kufuneka.
Gcwalisa iivenkile zokugcina ngokukhawuleza ngokusebenzisana neFulfillPanda.
Masiqalise! Nxibelelana nathi ngokukhawuleza!